हाइड्रोलाई सस्टेइन बनाएनौ भने अब विकास हुँदैन । सरकारले भन्न सक्नुपर्छ सय मेगावाटका लागि निजी क्षेत्रलाई छाडिदिन्छु त्यसभन्दा तल हामी आउँदैनौ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।	एउटा सानो लगानीकर्ताले आफूले बचाएर राखेको पैसा हाइड्रोमा हाल्नु भनेको निकै राम्रो कुरा हो । त्यो पैसा उसले अन्यत्रै अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेर सकाउँथ्यो होला तर उसले हाइड्रोमा लगानी गरेको छ । जोसँग ५० हजार छ, १ लाख छ त्यो पैसा स्टकमार्फत् हाइड्रोमा आकर्षण बढेको थियो । तर त्यसलाई सरकारले जोगाउन सकेन । त्यसैले अहिले ११/१२ प्रतिशत ब्याजमा हाइड्रोपावर सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
हाइड्रोपावरको अवस्था किन यस्तो भयो ? हाइड्रोपावर बिग्रनुमा सबैभन्दा पहिले त कस्ट नै हो । राम्रोसँग डिजाइन गरेर प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने २२/२३ करोड रुपैयाँभन्दा कममा बन्दैन । विद्युत् प्राधिकरणको खर्च ३३ करोडसम्म छ । किनभने उनीहरुले हेभी डिजाइन गर्छन् । उनीहरुले सबै टनेलमा कंक्रिट हालिदिन्छन् । रिस्क नै लिँदैनन् । हामी पैसा जोगाउन डिजाइनमा सम्झौता गर्छौ । त्यसैले कस्ट डाउन नगरी सुख छैन । एउटा त भ्याटले कस्ट बढाएको छ । १ करोड २५ लाख रुपैयाँ त प्रतिमेगावाट भ्याट लाग्छ । मूल्य मिनिमाइज गर्नका लागि क्यू फ्याक्टर छाडिदिनुपर्छ । क्यू फोर्टी भन्ने पनि संसारमा कहीँ देख्नु भएको छ ? बर्षामा पानी हुँदा नकिन्ने र हिउँदमा पानी नहुँदा किन्छु भनेर पनि हुन्छ ? वर्खामा पानी हुँदा क्यू ४० मा राख, त्योभन्दा बढी नराख, हिउँदमा पानी हुँदैन मलाई बढी दे भन्या हो नि । हाइड्रो पावर भनेको वर्खामै निकाल्ने हो । किनभने वर्षामा दक्षिणको बजार निकै बढ्दो छ । इनर्जी बैंकिङको कुरा छ त्यो गरे पनि त हुने रैछ नि त । तर विद्युत् प्राधिकरण आज पनि सुध्रेको छैन । क्यू पार्टीमै छ । अझ आरओआर गर्ने भन्छ ।	दोस्रोमा विदेशी लगानीकर्ताको समस्या छ । अहिले १५०० मेगावाटका लागि आएका छन् । पीपीए हाम्रो डलरमा नगर्ने भन्छ । कुन मुर्ख विदेशी छ जसले डलरमा लगानी यहाँ ल्याएर नेपालीमा कमाइ लैजाने ? उसलाई पनि थाहा छ नि हाम्रो अवस्था ।